#CODE - Okwu mmalite iji wepụta Ansys workbench - Geofumadas
#CODE - Okwu Mmalite na Usoro Okike iji Ansys workbench
Ndụmọdụ bụ isi iji mepụta usoro ihe eji arụ ọrụ n'ime usoro nyocha ihe omimi a.
Ọtụtụ ndị injinia na-ejikwa Solid Modeler na usoro nwere oke iji dozie nsogbu kwa ụbọchị nke nrụgide na-ekwu, nrụrụ, mbufe ọkụ, usoro mmiri, electromagnetism, n'etiti ndị ọzọ. Usoro ihe ọmụmụ a na-ewepụta nchịkọta klaasị maka njikwa ANSYS Workbench, otu n'ime mmemme kachasị zuru oke na ịgbatị, ịme anwansị na usoro kachasị elu solids.
Klaasị na-eleba anya n'okwu banyere okike geometry, nyocha nrụgide, nyefe okpomoku na ụdị ikuku. Anyị ga-atụlekwa ọgbọ nke ezigbo meshes.
A na-eme atụmatụ ọganihu nke usoro ahụ iji soro usoro imewe ya n'ụzọ ezi uche dị na ya, yabụ isiokwu ọ bụla ga-enyere anyị aka iru nyocha ndị siri ike.
Mgbe ị na-atụle ihe ndị bụ isi, ị ga-ahụ ihe atụ bara uru ị nwere ike ịgba ọsọ na kọmpụta nke gị ka iwelie ọrụ gị. You nwere ike ịga n’ihu nke aka gị, ma ọ bụ nwee ike gaa isiokwu ebe ịkwesịrị ịkwalite ihe ọmụma.
ANSYS Workbench 15.0 ka emeputara n’usoro nke ga - enyere gi aka iwebata uzo ohuru iji soro oru gi rụọ oru n’uzo. N'ebe a, ị ga - amụta iji ngwaọrụ ndị a, ma ị rụọla ọrụ na nsụgharị ndị gara aga ma ọ bụrụ na ịmalite.
Na ngalaba okike nke geometry anyị ga - eduzi gị site na usoro nke imepụta ma na-edezi geometries na nkwadebe maka nyocha na ANSYS Mechanical, na-ekpuchi isiokwu ndị dị ka:
Njirimara onye ọrụ
Ihe okike banyere eserese.
Ihe omuma nke geometries nke 3D.
Bubata data site na ndi ozo
Ihe eji enwe paramita
N'ime akụkụ ndị a, anyị ga-elekwasị anya na sistemụ mebere igwe. N’ebe a, ị ga-amụta iji modulu a rụọ ọrụ nke ọma iji wuo usoro ịme anwansị, nyocha ya ma kọwaa nsonaazụ ya, kpuchie isiokwu dị ka
Nchịkọta nhazi ihe omimi
Nnyocha Mmegharị Vibration
Ọmụmụ banyere ikpe na ọtụtụ ndapụta.
Anyị ga na - eme ka ozi gị dị ọhụrụ mgbe niile, yabụ ị ga - enwe usoro siri ike ebe ị nwere ike ịchọta data bara uru ma bara uru.
Jiri ANSYS Workbench soro ndị ezinụlọ ANSYS rụkọọ ọrụ
Nghọta Izugbe Onye Okike
Ghọta usoro ị na-arụ simulations statal, modal na thermal
Jiri uzo iji meputa onodu di iche iche
A na-atụ aro ka ịmara tupu inyocha nyocha ngwa ngwa mana ọ dịghị mkpa ịnweta ogo injinia
Ọ na-atụ aro ka itinye ihe omume ahụ na kọmputa nke gị ka ị nwee ike iso omume gị
Ahụmịhe gara aga na njikwa mmemme yana gburugburu CAD
Ihe omuma banyere iwu mbuala nke ihe eji aru oru, ihe eji kpo oku na ot
Ndị ọrụ aka na-arụ ọrụ na mpaghara ahụ
Usoro BIM Ihe nkuzi BIM Usoro nkuzi
Previous Post«Previous #LAND - Nmepụta Mmetụta Ntinye Anya
Next Post #BIM - Nleta Ntọala Ntọala site na iji RevitNext »
Otu azịza na "#CODE - Okwu Mmalite iji chepụta usoro iji Ansys workbench"
Diego villanueva kwuru, sị:
Kedụ ka m ga - esi were nkuzi ahụ… ???